समाजसेवा देश डुलेको साइकल !
यो यात्राको योजना बनाउँदा लामो छलफल भयो । हेल्प नेपालको प्रोजेक्ट वर्क भएका ठाउँमा पुग्ने गरी यात्राको खाका तयार भयो । छलफल भयो र तोकियो बाटो– दोलखादेखि धुलिखेल, काठमाडौं, हेटौँडा, चितवन, बुटवल, भालुवाङ, लालमटिया हुँदै डडेलधुरा, दिपायलसम्मको ।
यात्राको योजनासँगै एक दिनमा सकेसम्म एक सय किलोमिटर गुड्ने योजना देवेन्द्रले बनाए । यो औसत हिसाब–किताब थियो, उनको । कहिले १०/२० किलोमिटर कम हुनसक्थ्यो । कहिले बढी ।
अनि, सुरु भयो दोलखादेखि दिपायलसम्मको परोपकारी साइकल यात्रा । र, यात्रा सकिँदा १३ दिन बित्यो । खासमा १२ दिनमा साइकल यात्रा सकिने भनिएको थियो । तर, दिउँसै डडेलधुरा पुगे पनि डडेलधुराका साथीहरूले भोलिको दिनसम्म बस्न आग्रह गरे । उनले आग्रह टार्न सकेनन् । किनभने, पुस्तकालय डडेलधुरामा नै निर्माण हुँदै थियो ।
उनी भोलिपल्ट मात्र दिपायल–सिलगढी पुगे । र, यात्राको मैझारो गरे ।
पहिले–पहिले पनि दिनको एक सय किलोमिटर साइकल नगुडाएका हैनन् उनले । काठमाडौं–नुवाकोट–काठमाडौं, काठमाडौं–गोटीखेल, धुमखर्क–पनौती–काठमाडौंको सय किलोमिटर बढी यात्रा पनि गरेका हुन्, उनले । उपत्यका र यस वरपरका विभिन्न ठाउँमा एकदिने साइकल यात्रा थुप्रै गरेका छन् देवेन्द्रले ।
तर, यस्तो यात्रामा साथीहरूको जमात हुन्थ्यो । कहिले धेरै त कहिले दुई–तीनजना मात्रै । साथीहरूसँग साइकल यात्रामा जाँदा सहज हुने गरेको देवेन्द्र बताउँछन् । साइकल चलाइरहँदा पनि साथीभाइबीचको कुराकानीले आराम मिल्छ । तनाव हुँदैन । समस्या उत्पन्न भए त्यसको निराकरण गर्ने विषयमा कुरो हुन्छ । अर्थात् धेरै सहज हुन्छ ।
तर, एक्लो यात्रामा चुनौती र तनाव धेरै भोग्नुपर्ने उनको तर्क छ । देवेन्द्र भन्छन्, “एक्लो साइकल यात्रामा धेरै चुनौती झेल्नुपर्छ । हावाको प्रेसर त खेप्नुपर्छ नै समयको प्रेसर पनि कम हुँदैन । किनभने, तोकिएको समयमा नै निश्चित स्थानमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । तथापि, धेरै वर्षदेखि साइकलमा अभ्यस्त भएकोले खासै धेरै समस्या भोग्नु परेन ।”
तोकिएको गन्तव्यमा हेल्प नेपाल नेटवर्कका साथीहरूको साथ र सहयोग रह्यो भने कतिपय ठाउँमा साइक्लिङ एसोसिएसनका साथीहरूको साथ रहेको पनि देवेन्द्र बताउँछन् । साथ दिने साथीहरू र स्थानीय बासिन्दाहरूको सहयोगले कतिपय ठाउँमा आफू भावुक बनेको उनी बताउँछन् ।
देवेन्द्र बस्न्यातले सडक समस्याको कुरो उठाए । सडकमा गुड्ने ठूला गाडीको कुरा उठाए । उनका अनुसार सडकमा अनुशासन सोच्नै नसकिने विषय हो । आफूभन्दा कमजोर सवारी–साधनलाई स्पेस दिनुपर्छ भन्ने सडकमा सोचिँदैन । साइकल, मोटरसाइकललाई त झन् पेल्ने नियतले गाडी गुडाउने गरेको उनले अनुभव गरेका छन्, धेरैपटक । यसको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, “दर्शन र सिद्धान्तमा जे भनिए पनि व्यवहारमा सडक अनुशासन अलिकति पनि छैन । विडम्बना ! सडकमा सधैँ ठूलाले सानालाई डोमिनेट गरिरहेको पाइन्छ ।”
देवेन्द्रका अनुसार सातामा एक दिन मात्रै भए पनि साइकल चलाउँ भन्ने नागरिकमा चेतना भए त्यसले सडक अनुशासन कायम हुने आँकलन गर्न सकिन्छ । उनले भने, “तर, छैन ! टाढाको कुरो नगरौँ । अत्यधिक वातावरण प्रदूषणका कारण काठमाडौंका स्कुलहरू बन्द गरिए । तर, गाडी चलाउनेहरूले गाडी छोडेनन् ! प्रदूषणको मतलब नै गरेनन् ! दुई–तीन दिन हामीले गाडी नचलाउँ न त, साइकल लिएर अफिस जाउँ न त भन्ने कसैले सोच्दै सोचेनन् ! अनि, हामीले नियम सिद्धान्त र दर्शनको कुरो गरेर के पाउँछौँ र !”
कुराकानीका क्रममा देवेन्द्रले यात्राक्रममा भएका केही रोचक प्रसंग सुनाए । दोलखाबाट बिहान ८ बजे नै धुलिखेलका लागि उनी निस्किनुपर्ने थियो । तर, अनेक अलमलले उनको यात्रा १० बजेपछि मात्रै सुरु भयो ।
उनलाई साँझ धुलिखेल पुग्नु थियो । समयको यो दबाबअनुरूप साइकलको पाइडल दाब्नुपर्ने भयो । बिहानको समयमा शरीरमा जति ऊर्जा हुन्छ, त्यो दिउँसो घट्दै जान्छ । त्यसैले उनी शीतल समयमै दूरी छोट्ट्याउन चाहन्थे । तर, सम्भव भएन ।
बीचमा खाना खान रोकिए देवेन्द्र । एउटा पसलमा पसे । तर, त्यहाँ खाना रहेनछ । अनि, उनले देखे, बाहिर मानिसहरू बसेर खाइरहेको । उनले होटेल साहुलाई सोधे । होटेल साहुले ‘उनीहरू तीर्थयात्री भएको र आफैँले खाना बनाएर खाएको’ बताए ।
देवेन्द्र हाँसे । भने, “अब के गर्ने । म अगाडि बढ्ने सोचमा थिएँ । बाहिर निस्किएको मात्र थिएँ, कलेज पढ्दाका साथी दीपक कोइराला भेट भए । उनले ‘कहाँ आएको ?’ भने । मैले साइकल यात्रामा निस्केको कुरा गरेर खाना खान छिरेको तर खाना नभएको बताएँ । त्यसपछि उनले आफू तीर्थयात्री समूहमा नै रहेको बताउँदै त्यहीँ खाना खान भने । र, म केही बेरपछि खाना खाएर धुलिखेलतिर लागे । यसलाई त म भगवान्ले नै जुराएको भन्छु ।”
त्यस दिन उनी धुलिखेल पुग्नुपर्ने थियो । तर, पाँचखाल पुग्दा टिपरहरूको ओहोर–दोहोर चर्को भइसकेको थियो । ट्राफिकले देवेन्द्रलाई यात्रा गाह्रो हुन सक्ने बताउँदै त्यतै बस्न भने । ट्राफिकको कुरा मानेर उनले पनि त्यहीँको एउटा होटेलमा रात बिताउने निर्णय गरे । र, भोलिपल्ट बिहान मात्रै धुलिखेलतिर लागे ।
उनले भने, “ट्राफिकले जोखिमपूर्ण भनिसकेपछि कम्प्रोमाइज त गर्नु नै पर्यो । म बसेको होटेल साहुलाई मैले बिहानै सबेरै ढोका खोलिदिनुस् है भनेको थिएँ । किनभने, मैले ८ बजे धुलिखेल आइपुग्छु भनेको थिएँ । तर, होटेलको मूलगेटको साँचो हराएर त्यहीँ नै ६ बज्यो ! बल्ल–बल्ल चाबी भेटियो र म धुलिखेलतिर हिँडे ।”
देवेन्द्रले पश्चिमी क्षेत्रका केही रोचक प्रसंग सुनाए । जंगलको बीचबाट यात्रा गर्दाको अवस्था बेग्लै हुने उनी बताउँछन् । धेरै जोखिमपूर्ण हुँदाहुँदै पनि जंगलको बीचबाट आफूले साइकल कुदाएको प्रसंग आफ्ना लागि अविस्मरणीय रहेको उनी सुनाउँँदै थिए ।
बर्दियाको जंगलको इलाकामा भने उनले १५ किलोमिटर बाटो गाडी चढ्नु प¥यो । निकुञ्जका सुरक्षाकर्मीहरूले उनलाई साइकल चढ्ने अनुमति दिएनन् । ‘तपाईंहरू एक सयजनाको जमात भए पनि साइकलमा जान दिन्नौँ’ भनेपछि उनले तिनका अर्तीलाई मान्दै अम्रेनीबाट चिसापानीसम्मको यात्रा बसमा नै गरे । र, फेरि चिसापानीबाट साइकलमा अगाडि बढे ।
उनी भन्छन्, “बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जनावरहरू बाहिर राजमार्गतिर निस्किरहेका हुन्छन् । मैले सुरक्षाकर्मीसित ठट्यौली गर्दै भनेँ, ‘मैले जंगलमा बाघ देखे म लक्की, झम्टे भने मात्र अनलक्की’ । तर, उनी के मान्थे ! र, त्यो १५ किलोमिटर मैले बसमा यात्रा गरेँ । वास्तवमा यो मेरा लागि एकदमै रोमाञ्चक यात्रा रह्यो । म घुम्न मन पराउने, प्रकृत्तिमा डुब्न र रम्न मन पराउने, रङहरूमा रंगिन मन पराउने भएकोले यो एकल यात्रा भए पनि रोमाञ्चक रहेको मेरो अनुभव छ ।”
#देश डुलेको साइकल !
दुबै हात नहुनेलाई यस्तो उपहार आउँछ... राम्रोसँग बजाउनु भन्दै गितार आउँछ।। राम्रो काम भुलेर पनि नगर्नु होला हजुर... यो नेपाल हो हजुरलाई कारागार आउँछ।। पुरै घर बन्ने राहत आउँछ अनुदानमा हेर्नुस्... फाटेको त्रिपाल बोकेर मेरो सरकार आउँछ ।। अकालमै मरेका छन दुर्गममा खान नपाएर... उता खाद्यान्न कुहियो भन्ने समाचार आउँछ।। जिन्दगी खोज्दा खोज्दै सकिन्छ ज़िन्दगी ... बल्छीमा उनिएर यौटा जिन्दगी किनार आउँछ।। तिलक भट्टराई “अन्जान” सुनवल १२ भुमही, नवलपरासी १६ घण्टा पहिले
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, न्यू साउथ वेल्स च्याप्टर, अस्ट्रेलियाको अध्यक्षमा ममता तिवारी निर्वाचित भएकी छन् । ममता तिवारीको... १७ घण्टा पहिले
भीष्म उप्रेतीले ५/६ कक्षामा हुँदै पहिलोपटक कविता लेखे । त्यो कविता प्रतियोगितामा पठाए । अनि, पूर्वाञ्चलका लागि प्रथम हुँदै पुरस्कार... २१ घण्टा पहिले